ပေါ့ဘာ၏ခြေစွမ်းအပေါ် စိုးရိမ်နေရန်မလိုကြောင်း ဆိုးလ်ရှားပြောဆို ၊ မိုက်ဒင်း ထုတ်ပယ်သော ၁ဝ?? - Yangon Media Group
မန်ယူနည်းပြဆိုးလ်ရှားက ကွင်းလယ် လူပေါ့ဘာအနေဖြင့် ဂိုးသွင်းနှုန်းကျဆင်း လာသည်မှာမှန်သော်လည်း ¤င်း၏ခြေ စွမ်းအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်နေရန်မလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပေါ့ဘာသည် မန်ယူသို့ဆိုးလ်ရှား ရောက်လာပြီးနောက် ပထမ ၁၂ ပွဲတွင် ကိုးဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်း ပွဲများ၌ခြေစွမ်းကျဆင်းခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲအရပ် ရပ်နောက်ဆုံးခုနစ်ပွဲဆက်တိုက် ဂိုးပေါက် ပျောက်ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ဆိုးလ်ရှားက ”ပေါ့ဘာဟာ ဒီနေ့ပွဲမှာ လူကာကူနဲ့အကောင်းဆုံးချိတ် ဆက်ကစားပြီး ဂိုးဖန်တီးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ နီး စပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူဟာ တခြားကစား သမားတွေလိုပဲ အကောင်းဆုံးအား ထုတ်နေပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ထင်သလိုမဖြစ်တဲ့နေ့တွေရှိတတ် တာပါပဲ”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
မန်ယူအသင်းသည် ဝုဗ် နှင့်ပွဲတွင် ကွင်းလယ်လူတော် မီနေး၏ဂိုးဖြင့် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ သော်လည်း ဂျိုတာက ချေပဂိုး ပြန်လည်သွင်းယူခဲ့ပြီး အသင်းခေါင်းဆောင် အက်ရ်ှလေယန်းထုတ်ပယ်ခံရပြီး နောက် စမောလင်းက ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းသည့်ဂိုး ဖြင့် အရေးနိမ့်ခဲ့ရသည်။
ဆိုးလ်ရှားက ”ဒီပွဲဟာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဂိုး၊ သုံးဂိုးလောက် သွင်းယူနိုင်ခဲ့သင့်တဲ့ ပွဲတွေထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂိုး ရနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး တွေရခဲ့ပေမယ့် သူတို့ဂိုးသမား က ကာကွယ်မှု တွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမှားတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ဂိုးရ အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဝုဗ်ဟာ ဒီနိုင်ပွဲနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ကစားသမားတွေဟာ ၁ဝ ယောက်ကျန် အနေအထားမှာ တောင် ကစားပုံ ကောင်းခဲ့ တယ်လို့ထင် ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင် အက်ရှ် လေယန်းသည် ယခုပွဲတွင် နှစ်ဝါတစ်နီဖြင့် ထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက် ¤င်း၏ကစား သမားဘဝတွင် ၁ဝ ကြိမ်မြောက် ထုတ်ပယ် ခံရသည့်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလို ယန်းကိုထုတ် ပယ်ခဲ့သော ကွင်းလယ်ဒိုင်မိုက်ဒင်းမှာလည်း ဒိုင်လူကြီးဘဝတွင် ကစားသမားအယောက် ၁ဝဝ အထိထုတ်ပယ်ခဲ့သောမှတ်တမ်းသစ် ကိုရရှိခဲ့သည်။
အသက် ၅ဝ အရွယ်ရှိ မိုက်ဒင်းအနေ ဖြင့် ဒိုင်တစ်ဦးအဖြစ် ၁၉ နှစ်ကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ စဉ်အတွင်းကစားသမား ၁ဝဝ ဦးအထိ ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းကစား သမားများတွင် ပရီးမီးယားလိဂ် က စားသမား ၆၇ ဦးအထိ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
မိုက်ဒင်းသည် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၄၇၇ ပွဲအထိ တာဝန်ယူပြီး ပွဲအရေအတွက် အများဆုံးဒိုင် ဖြစ်ပြီး ဒိုင်လူ ကြီးဘဝ အဝါ ကတ်ပြသမှုအ ကြိမ်အရေအ တွက်မှာ ၁,၇၃၁ ကြိမ် ရှိခဲ့ကာ ယခု နှစ်ရာသီတွင်အ ဝါကတ်အကြိမ် ၁ဝဝ ကျော်နှင့် အနီကတ် ၁ဝ ကြိမ်ပြသထားသည်။
မက်ဆီအပေါ် မှီခိုလွန်းနေခြင်းမှာမဖြစ်သင့်ကြောင်း နည်းပြဗဲလ်ဗာဒီ ဆို
အိုင်အက်စ် ခြေကုပ်စခန်းများအား ဆီးရီးယားတပ်များက အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်၊ အိုင်အက်စ် ၃၂ ဦး ?
ပြည်နယ်နှစ်ခု၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ထိုင်းနိုင်ငံက စိတ်ဝင်စားနေ